HomeWararka MaantaDiego Godín: “Khaati Ayaanu Ka Taaganahay Dagaalka”
Wargeyska AS ee ka soo baxa dalka Spain ayaa waraysi la yeeshay difaacyahanka Atletico Madrid ee Diego Godin, kaas oo uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ku jirto qaabka dagaal ee ay kooxdiisu u ciyaarto, kulanka Sabtida ee Real Madrid iyo arrimo kale oo badan.
Real Madrid in aad garaacdaan ma u aragtaa in ay daruuri u tahay rajada kooxdaada ee La Liga?
Waa ciyaar muhiim ah oo aanu waajahayno cadow toos ah oo aanu kulmayno La Liga. Waxa ay ka dhacaysaa ciyaartu garoonka Calderon, dabcanna waa in aanu guuleysano.
Real Madrid ama Sevilla, kooxdee ayaad jeclayd in ay badiso Arbacadii?
In ay labadoodu kharasaan ayaan jeclaan lahaa, waayo tartan ayay nagula jiraan dhamaan kooxaha Sevilla, Valencia, Barca iyo Madrid, wayna caddahay in aanu dooneyno in dhamaantood ay dhibco lumiyaan annaguna aanu guuleysano.
Profe Ortega, tababarkii shalay markii aad samaynayseen waxa uu kugu yidhi: “Markaynu halgamayno waa in aanad cidna ku xanaaqin”. Markaa miyay ku dhibtaa in dadku Atleti ku tilmaamaan koox qalalaase?
Dabcan. Khaati ayaanu ka taaganahay, mana aaminsanin sheekadan, mana garanayo halka ay ka timid. Waanu tartannaa sidii aanu sannado badan oo kaleba samayn jirnay, maalin walbana tababarka ayaanu sidaa ugu tartannaa, mana aha mid qalalaase. Kubadda cagta ayuun baanu ciyaarnaaye wax kale ma samayno.
Fikir noocee ah ayaad ka haysataa Real Madrid?
Waa koox awood badan, way wanaagsanayd qaybtii hore ee sannadka. Waxa aanu waajahaynaa Madrid-da ugu fiican, waana in aanu u shaqayno oo aanu u diyaar garowno sidii aanu u dhaawici lahayn sidii aanu yeelay kulamadii horeba.
Miyaad maqashay in Cavani imanayo (Atletico)? Mase la hadashay isaga?
Waxba maan maqal, laakiin wax kasta oo wanaag ahi kooxda ayyuu u fiican yahay. Waxa aanu haysanaa Mandzukic iyo Torres, haddii uu Cavani yimaaddona horumar iyo tayo ayuun buu nagu soo kordhinayaa.
Marka aad eegto shantii Derby (Real vs Atletico), ma kula ahay in Atletico ay guuleysan doono kulanka Sabtida?
Ma jirto cid la odhan karo way guuleysanaysaa, xattaa annaga oo ku guuleysanay kulamadii u dambeeyey ee Derby-ga ahaa. Ciyaarihii tegay waa taariikh, guulna kuuma keenayaan.
Laakiin, miyaanay kula ahayn in calankiinu taagan yahay marka aad eegto Madrid?
Tan iyo kulankii Copa del Rey, waxa aanu helnay qaab aanu kula ciyaarno oo aanu gacanta sare ku yeelanay. Waanu guul darraysan karaynay, barbarayn karaynay ama guuleysan karaynay, laakiin waxa aanu ku dhegannahay qaab ciyaareedkayaga. Ma aha kaliya marka aanu la ciyaarayno Madrid, laakiin kooxaha kale oo dhan, laakiin Madrid waxay u baahan tahay in lagala hor tago cadaadis iyo soojeed oo lagu daray awood.
Miyaanay werwer kugu haynin in garsooruhu uu Atletico u haysto koox qalalaase?
Maya. Kulamadii u dambeeyey ee aanu Madrid la ciyaarnay garsooreyaal wanaagsan ayaa hayay. Kaliya waxa aanu yoolka saarnay in aanu kubadda ciyaarno.
Jawiga Madrid Derby miyuu isbeddelay?
Sannadkii u horreeyey ee aan halkan imid awood umaanaan lahayn in aanu ka badino Real Madrid, waxaanay noo ahayd khibrad. Mar kasta waa in waxa wanaagsan laga fikiro, waa dhab in aanu nahay koox isbed-beddel badan oo sannadihii u dambeeyey wax iska beddeleen. Atleti waa koox tartan, waxa ay halgan la gashaa awoodaha waaweyn sida Madrid iyo Barca, taas ayaana ah sababta ay dadku noogu qaateen kuwo qalalaase, fikir xunna ay nooga haystaan.
Ciyaartii Barca, goolal degdeg ah ayaa la idinka dhaliyey. Ma ka shaqaynaysaan sidii aanay mar dambe u dhici lahayn?
Haa, toddobaadkan ayaanu ka shaqaynaynaa oo aanu isku deyi doonaa in aanu iska caabino weerarka degdegga ah ee Madrid. Waxa ay haystaan ciyaartooyo dheereeya, in aanu dareen u yeelano ayaananu isku deyi doonaa. Weerarka rogaal celinta degdegga ahna Madrid ayaa dunida ugu khatarsan.
Atletico sannadihii u dambeeyey bisha February ayay siiban jirtaye, ka warran?
Waxay ila tahay in aanu isbeddel wanaagsan samaynay, si fiicanna aanu u ciyaarnay January. Tijaabo adag ayaa Sabtida na sugaysa oo aanu isku deyi doono in aanu guuleysano, waxaanse ogahay in bil wanaagsan aanu dhamaysanay.
Haddii aad guul darraysataan (Kulanka Sabtida), miyaad maca-salaamayn doontaan horyaalka La Liga?
Maya. Waxaanu u halgami doonaa in aanu dhibcaha ka qaadano Madrid oo aanu soo yarayno inta ay naga horreeyaan. Haddise aanu guul darraysano, ilama aha in aanu maca-salaamayn doono La Liga. Wakhti badan ayaa wali ka hadhsan. La Liga wali lama odhan karo waxaas ayaa dhacaya.
83 aad : 4-2 …. Dhamaad : 5-4 Guul Ah! – Munich Oo Intay Kala Daba Timid Garaacday Leipzig
Ramsey Oo Qaylo Dhaan U Diray Dunida Kubada Cagta Markii Gool Sax Ah Laga Diiday Arsenal Kulankii Liver
LA Lakers vs Charlotte Hornets – Full Game Highlights | December 9, 2017 | 2017-18 NBA Season